Xaaladda Addis-Ababa oo maanta aad u kacsan iyo 23 qof oo la dilay (Warbixin) - Caasimada Online
Home Dunida Xaaladda Addis-Ababa oo maanta aad u kacsan iyo 23 qof oo la...
Xaaladda Addis-Ababa oo maanta aad u kacsan iyo 23 qof oo la dilay (Warbixin)
Addis-Ababa (Caasimada Online) – Dibadbadbaxo xooggan ayaa maanta ka socda magaalada Addis-Ababa, ayada oo dadka ay dalbanayaan in caddaaladda la horkeeno dadkii ka dambeeyey dilka 23 qof, oo lagu dilay weerar xalay ka dhacay duleedka caasimadda Addis-Ababa.
Saraakiil iyo goobjoogeyaal ayaa sheegay in rabshadaha oo ku salaysan qowmiyad ay dileen 23 qof, ayna sababeen in boqolaal kale ay ka qaxaan guryahooda.
Dibadbaxyaasha ayaa dowladda Itoobiya ka codsanayay inay ilaaliso ammaanka shacabka gaar ahaan qowmiyadaha laga tiro badanyahay kuwaaso sheegay in la bartilmaameedsaday.
‘Dad badan ayaa dhintay, guryo bandanna waa lagu burburay weerarka xalay dhacay” waxaa sidaas yiri madaxa booliska gobolka Oromia, Alemayehu Ejigu, kaasi oo intaas ku daray in 70 qof la xiray.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in weerarka xalay dhacay ay ka dambeeyeen dhallinyaro Oromo ah, kuwaasi oo beegsaday dad kasoo jeeda qowmiyadaha laga tirada badan yahay, sidoo kale bililiqeystay oo burburiyey goobo ganacsi.
Ra’iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa dhalleeceeyey falkan,w axaana uu sheegay in kuwa weerarka fuliyey ay yihiin dambiilayaal isku abaabulay inay dadka dilaan.
Rabshadaha ayaa ka dambeeyay , isu soo bixi lagu soo dhawaynayay Sabtidii hoggaamiyaha Jabhadda Xoreynta Oromada.
Ururka OLF ayaa in muddo ah ku kacsanaa dowladda balse ra’iisul wasaare Abiy Axmed ayaa liiska argagixisada ka saaray islamarkaasna ugu baaqay gogosha nabadda.